မုန့်ဟင်းခါးတောချက် Easy cook | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » မုန့်ဟင်းခါးတောချက် Easy cook
မုန့်ဟင်းခါးတောချက် Easy cook
Posted by weiwei on Jun 24, 2011 in Food, Drink & Recipes | 36 comments
နွယ်ပင်က မုန့်ဟင်းခါးဆိုးအရမ်းကြိုက်ပဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တော့ တစ်ခါမှ မချက်စားဖြစ်ဘူး အလုပ်ရှုပ်လို့လေ မဝေချက်ပြတဲ့ နည်းကတော့ မဆိုးဘူး လိုက်ချင်စားကြည့်ဥိးမှ ….
ငါးခူ ငါးကျည်း နဲ့မုန့်ဟင်းခါးအများဆုံးချက်ကြတယ် အဲဒါမဟုတ်ပဲ တစ်ခြားဘာငါးသုံးလို့ ရသေးလဲမဝေ …
ဘာငါးနဲ့မဆို ချက်လို့ရပါတယ် … အသားများပြီး ချိုတဲ့ငါးဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ ..
ငါးအသားများများနဲ့ချက်ချင်ရင် ငါးကြင်းလဲကောင်းတယ် ..
ငါးရှဉ့်နဲ့ချက်ရင် တော်တော်ချိုတယ်လို့ပြောကြတယ် …
နောက်တစ်ပတ် အလုပ်ပိတ်ရင် စမ်းပြီးချက်စားကြည့်မယ် …
အရင်တစ်ခေါက်က တော့ ရယ်ဒီမိတ်ကိုပဲ ဖေါက်ပြီးချက်တာ သိပ်စားမကောင်းပေမယ့် စားချင်နေတဲ့စိတ်တော့ တော်တော်ပြေသွားတယ်
အားပါး ကောင်းမှကောင်း ။
ထားဝယ်ဘက်က မုန့်ဟင်းခါးစားဘူးတယ် ပဲပြုတ်လဲပါတယ် စာကလေးချီးကြော်လဲပါတယ်။
တရွာတစ်ပုဒ်ဆန်းနော်။ မုန့်ဟင်းခါးမှာ ငှက်ပြောအူ ဘာကြောင့်ထည့်ပါသလဲ။
ဦးဖက်ရေ မုန့်ဟင်းခါးမုန့်ဖတ်က အချဉ်ဖေါက်ပြီးမှ လုပ်တာမို့ အဆင်မသင့်ရင် ၀မ်းသွားတတ်လို့ ထိန်းထားတဲ့ အနေနဲ့ အဖန်ဖြစ်တဲ့ ငှက်ပျောအူ ထည့်တာလို့ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ရှေးဗမာတွေက တခါတည်း အစာလည်းဆေး ဆေးလည်းအစာ ဖြစ်အောင် စီစဉ်ထားတယ် ထင်ပါတယ်။
တရုတ်ပြည်မှာနေတုန်းကတော့ ငှက်ပျောအူ မရှိတာနဲ့ ကြာစွယ်ကို ငှက်ပျောအူအစား ထည့်ချက်တယ် …
မုန့်ဟင်းခါးမစားရတာတောင် တော်တော်ကြာသွားပြီ.။ ၃ပတ်လောက်ရှိေ၇ာ့မယ်..။
ဘယ်နယ်က ဘာတွေထည့်စားကြသလည်း သိသလောက်လေးပြောပြကြပါဦးနော…
ဘဲသွေး( အုန်းနို့ ခေါက်ဆွဲထဲ ထည့်တာတော့ သိတယ်.. မုန့်ဟင်းခါးထဲထည့်သလား မသေချာ)
ခရမ်းချဉ်သီး (တောင်ငူဖက်က ထည့်တယ်ပြောသည်။ မသေချာ)
ပဲသီးတောင့်ရှည် ကြက်သွန်ဥ နဲ့ ဇီရာ က မော်လမြိုင်ဖက်က ရေစိမ်မုန့်တီမှာ ထည့်စားပါတယ် (ဘဲဥ၊ကြက်ဥ တော့ထည့်မချက်ဘူး)
ဟုတ်တယ် …. ပူစီနံ ကို မော်လမြိုင်ဖက် ကဇီယာ လို့ခေါ်တာ
ရေစိမ်မုန့်တီ ကငါးများများ စပါးလင် / ဂျင်းများများနဲ့ ပဲ ချက်တယ် ဆန်မှုန့်တို့ မြေပဲတို့ မပါဘူး အရည်ကျဲပေါ့
ရွှေကြည်မှုန့်ကို ပွအောင်ဆိုပြီးထည့်ကြတယ် …
ထန်းလျက်ခဲကို ချိုအောင် ထည့်သေးတယ် ..
ဘီစကွတ်မုန့်ကို ထောင်းပြီး မွှေးအောင်ထည့်တဲ့သူကလဲ ရှိသေးတယ် …
သီဟိုစေ့ကိုထောင်းပြီးထည့်ရင် စိမ့်တယ်ဆိုပြီးလဲ ထည့်ကြသေးတယ် …
မုန့်တီဖတ်ခြောက်ကြော် နဲ့ ပဲတောင့်၇ှည်နုတ်နုတ်လှီးထည့်ပြီး
ငါးကအစိုဆိုတော့ ကြာကြာထားချင်ရင် ခဲထားမှ။
EMS နဲ့ ပို့ပေးလဲ ချက်စားဘို့ အခွင့်အရေးမရှိ..ချက်ကြွေးမဲ့သူလဲမရှိပါခင်ဗျား
ငါးချဉ် နဲ့ ပုဇွန်ချဉ်ကို ညောင်လေးပင် / ပုဇွန်မြောင်းဘက်မှာ ထည့်စားပါတယ်။
ပဲခူးတိုင်း အရှေ့ဘက်ခြမ်း တော်တော်များများမှာ အရင်နှစ် နှစ်ဆယ်လောက်မထိ ဆန်နှစ် လို့ခေါ်တဲ့ ဆန်ကိုလုပ်ထားတဲ့ ခပ်ပျော့ပျော့ ပူတင်းလိုဟာကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထည့်စားတယ်။ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်တွေမှာ အဲဒါအမြဲလုပ်ထားရတယ်။ အလကားပေးရတာ။
ခရမ်းချဉ်သီး ထည့်စားတာ မှန်ပါတယ်။ အဲဒါက နယ်အလိုက်မဟုတ်ပဲ မြေပြန့်ရောက်နေတဲ့ ရှမ်းအစု အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေမှာ တော်တော်များများ တွေ့ရပါတယ်။ တောင်ငူ ၊ဖြူး၊ ကညွှတ်ကွင်း၊ ကျောက်ကြီး၊ ညောင်လေးပင် ပဲခူးအထိပါပဲ။ ယနေ့အထိပါ။
မိုးတွင်းဖက် ငါးပုစွန်ပေါတဲ့အချိန် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မြို့တချို့မှာ ပုစွန်ပါးသားနဲ့ ငါးဥကြော်လည်း ထည့်စားကြသေးတယ်။
မဝေကတော့ လုပ်ပြီ … ဗိုက်ဆာနေပြီ … မရတော့ဘူး …တကယ်ကျွေးတော့ ။
သတ်သတ်လွတ်ချက်ချင်ရင်တော့ ဆီသတ်တဲ့အထဲကို ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုန့်နဲနဲထည့်ပါ … ဆန်အကျက်မှုန့်အပြင် ပဲအကျက်မှုန့်ကိုပါ ထည့်ပါ … ချိုတဲ့အရသာအတွက် ကောက်ရိုးမှိုထည့်လိုက်ပါ … အစိမ့်အရသာကြိုက်ရင်တော့ မြေပဲထောင်းထည့်ပါ … ကျန်တာတွေကတော့ ငါးနဲ့ချက်သလို အတူတူပါပဲ …
အသား အစား ခုခေတ်မှာ အသားတု ထည့်လို့ရပေမယ့် အရင်တုန်းက ပဲပြားကို ဆားနည်းနည်းနယ် ပြီးရင် ငဖယ်လိုမျိုး ကြော်ပြီး ညှပ်ပြီး ထည့်ချက်စားကြတယ်။ ကျမကတော့ ဟင်းရည်ချက်ရင် အဲဒီလို ပဲပြားကြော်ထည့်တာကို အသားတုထက် ပိုကြိုက်တယ်။
နေပြည်တော် သွားတုန်းက စားခဲ့တဲ့ မုန့်ဟင်းခါးက ကြက်သားတွေ ပါတာ တွေ့တယ်။
အကြော်နဲ့ဟင်းရေ သောက်ရတာကို သဘောကျတယ်။
မုန့်ဟင်းခါး..ကို ငါးခူ အဆင်သင့်မရှိလို့ ငါးသေတ္တာ နဲ့ ချက်တာ စားဖူးတယ် နဲနဲတော့ နံတယ်..ငါးသေတ္တာအနံ့ ၊ ကြိုက်တဲ့သူတော့ ကောင်းပါတယ်..သူများတွေတော့ ပဲသီး၊နံနံပင် စုံနေတာပဲ ထည့်စားကြတယ် ကျွန်တော်ကတော့ မကြိုက်ဘူး ဘူးသီးကျော်နဲ့ ဘဲဥ ကိုတော့ထည့်စားတယ် ဒါတောင် အိုးဘဲဥဆိုတာရှိသေး…:)
မအူပင်မြို့နယ် ရွာတွေဘက်မှာ မုန့်ဟင်းခါးကို လှေနဲ့ လိုက်ရောင်းတယ် ………ထူးဆန်းတယ် သူတို့က မုန့်ဖတ်ကို အချိန်နဲ့ရောင်းတာ(ဥပမာ..မုန့်ဖတ် ၅ကျပ်သားဆို ဘယ်ဈေး) အဲဒီလို ဟင်းရေကိုတော့ များများထည့်ပေးတယ်..
ကျေးဇူးပါ မဝေရေ၊ ချက်စားကြည့်လိုက်ဦးမယ်နော် …..
သဂျီးမုန်Uဟင်းခါးချက်ရင် ဘီယာနဲ့ချက်တယ်၊ မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ဘုကတော့ ထန်းရည်ထည့်တယ်။ တပ်မ၇၇စစ်သားကတော့ ဂျော်နီဝေါ်ကား ထည့်တယ်ဆိုလား။ သူတို့ကပ်တဲ့ မုန့်ဟင်းခါး ဆွမ်းစားပြီးရင် ခြေကျင်ခရီးကြွလာတဲ့ ကိုယ်တော်တွေကို ကားနဲ့ပြန်ပို့ပေးရတယ်။ :O:
သိတော်မူတဲ့အတိုင်း..ယူအက်စ်က နှုတ်ခမ်းမွေးနဲ့ကြောင်ငါး(Cat Fish)တွေက ဒိုက်စော်နံတယ်မဟုတ်လား..။
အရက်ဆိုတာက.. အပူချိန် ၁၀၀ စင်တီရောက်ရင် ခပ်ပြင်းပြင်းတွန်းထွက်အငွေ့ပြန်တယ်လေ..။
အရက်ငွေ့ က.. တွန်းတိုက်အားပြင်းတော့.. ငါးရဲ့ညီနံ့ တွေဆွဲထုတ်သွားတယ်..။
အရက်ဓါတ်(အယ်လ်ကိုဟော) အငွေ့ပြန်ရင်.. အချို(သကာ)ရည်ကျန်တယ်..။
ပြောရရင်.. ဂျပန်က(၀ရှောကု)အစားတွေ အကုန်လိုလို.. အရက်ထည့်ချက်ရတယ်..။
ဆာကေး(အရက်)၊ မီရင်(သကာရည်)၊ ရှိုးယု(ပဲငံပြာရည်) က..ဂျပန်အစာတွေရဲ့ ..မထည့်မဖြစ်..အတွဲပဲ..။
သက်သတ်လွတ်ပဲစားတဲ့တိဘက်က..ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို.. အရက်နဲ့ပေါင်းထားတဲ့.. ရွေဖရုံသီးနဲ့.. တပျစ်သီးခြောက်ပေါင်း ဆွမ်းကပ်ခဲ့ရတာ..သတိရမိသား..။အဲဒါလေးမှ ကြိုက်တယ်ဆိုလို့လေ..။
သုရာမေရယ မဇ္ဇပ္ပမာဒဌာနာ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။..
ဒီနေ့.. မုန့်ဟင်းခါးအကြောင်း စကားစပ်မိတာ… မြစ်ဝကျွန်းပေါ်..တချို့ နယ်တွေ..မုန်ဟင်းခါးထဲ..ကောက်ညင်းပေါင်: ထည့်တယ်တခုတိုးပါတယ်..။
ရခိုင်မှာတော့ သူတို့မုန့်ဟင်းခါးမှာ ၀က်သားထည့်ချက်ပါတယ်တဲ့။ကွက်ခိုင်ဘက်က ပုတ်သင်ညှိကိုမီးဖုတ် အရည်ခွံဆုတ်ပြီး ထည့်ချက်ပါတယ်တဲ့။ဗာမာလိုဆိုရင်တော့ ငါးဘတ်၊ငါးရွှေတို့ ထည့်ချက်ရင်လည်းရပါတယ်၊အသားများပြီးပိုချိုတာပေါ့။သထုံမှာတော့ ပဲသီးစီမ်း၊ကြက်သွန်နီ၊ပူစီနံ တွေထည့်စားကြပါတယ်။
တကယ်စားရရင်ကောင်းမယ်။ ဘယ်နား ရှာစားရမလဲကွယ်တုိ့……း(း(
အဟင့် ရွှတ် ရွှတ် ..ရှာစားမရတဲ့သူ သွားရည်ယိုအောင် လုပ်ကြတယ်..
သူကြီးလဲပါတယ်..ငတ်ပါတယ်ဆိုမှ ..သူတို့က မုန့်ဟင်းခါးတဲ့ …
ပြန်ချင်ပြီဗျို့ …အဲဒါ မဝေရဲ့ မုန်ဟင်းခါးကြောင့်…….
သွားစမ်း ဘားလမ်း စားစမ်း မေမုန့်ဟင်းငါးလို့ကြော်ငြာပြီးရောင်းခဲ့ဘူးတဲ့ ဆရာသော်တာဆွေကတော့
မုန့်ဟင်းငါးဟင်းရည်ကို ပေါင်မုန့်တို့စားဆိုပြီးရောင်းခဲ့တာ လူကြိုက်အတော်များခဲ့တယ်လို့
ပဲရာဇာ(ခ)ပဲနီလေးနဲ့ချက်တဲ့မုန့်ဟင်းခါးကလဲ ပျစ်ပျစ်မွှေးမွှေးလေးနဲ့ ကောင်းမှကောင်းပါဘဲ။
မန်းဒလေး ဆေးရုံကြီးနားက လမ်းဘေးဆိုင်တဆိုင်မှာတော့ တညင်းသီးပြုတ်ထည့်ပေးတာတွေ့ဘူး၏